किन खुला मासु नै रोज्छन् उपभोक्ता ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more किन खुला मासु नै रोज्छन् उपभोक्ता ?
किन खुला मासु नै रोज्छन् उपभोक्ता ?
फागुन ६ गते, २०७६ - १३:४६
नेपालगञ्ज । नेपालगञ्जमा परम्परागत रुपमा बध गरी बिक्री हुने खसीको मासुका पारखी अहिले पनि थेरै छन् । खुला स्थानमा उपभोक्ताले देख्ने गरी बध गरी बिक्री गर्ने मासु यहाँका उपभोक्ताको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ । आप्mनै अगाडि बध गरेको खसीको मासु ताजा हुने र बासी तथा बाख्रीको मासुको मिसावट नहुने भएकाले त्यस्तो मासु नै खरिद गरेर ल्याउने गरेको नेपालगञ्ज—१० का हिरण्य शर्माको जानकारी दिए।
चिकित्सका अनुसार खुलारुपमा बध गरेको मासु स्वास्थ्यमा प्रतिकूल हुने गर्छ । डा खेमा भण्डारी भन्छन्, “मासु केही घण्टा ‘फ्रिज’मा राखेर राम्ररी पकाएरमात्र खानुपर्छ अन्यथा यसबाट धेरै थरीका जटिल रोग लाग्ने सम्भावना हुने गर्दछ ।”
प्रदेश सरकारले मार्ट सञ्चालकलाई अनुदानसमेत दिएको छ । यम्मी फ्रोजन फुड्सलाई ५० लाख र नेपालगञ्ज मिट मार्टलाई रु ३२ लाख अनुदान दिइएको प्रदेश ५ सरकारका कृषिमन्त्री आरती पौडेलले जानकारी दिए। ती मार्ट सञ्चालकले कुखुरा, खसीको मासु बिक्री गर्ने गरेका छन् । स्वास्थ्यका लागि छाला, बोसो र रगत भएको रातो मासु खानु हुँदैन । यसलाई बुझेका व्यक्तिले फ्रोजन गरेको मासु किन्ने गरेका छन् । नबुझेकाले मात्र परम्परागत रुपमा बध गरिएका मासु खरिद गर्ने गरेको यम्मी फ्रोजन फुड्सका सञ्चालक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
फागुन ६ गते, २०७६ - १३:४६ मा प्रकाशित